အံဩဖွယ်ရာ နေမဝင်တဲ့ မြို့ နှင့် (၂၄) နာရီ ပတ်လုံး နေမမြင်ရတဲ့ မြို့ – Zartiman
နော်ဝေးနိုင်ငံ Svalbard မြို့ငယ်လေးမှာဆိုလျှင် နွေရာသီ ရက် (၆၀) လုံးလုံး နေမဝင်ပဲ၊ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသတစ်ခုလုံးဟာ နှစ်စဉ် ဧပြီလ မှ သြဂုတ်လအထိ နေကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ.. အောက်တိုဘာလ မှ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ကျပြန် တော့ ၂၄ နာရီပတ်လုံး နေကို မမြင်ရပြန်ပါဘူး။ မတ်လ နဲ့ စက်တင်ဘာလတွေမှာတော့ နေရောင်ခြည်ဟာ အီကွေတာပေါ်ကို တည့်မတ် စွာ ကျရောက်ခြင်းကြောင့် နေ့ နဲ့ ည အချိန် တူညီ ကြပါတယ်။
နေ့ ၆ လ၊ ည ၆ လ လို့ ပြောကြတာ ကြားဖူး ကြမှာပါ။ တချို့ကလဲ အဲ့ဒီ့ဆိုလိုရင်းကို မကြာခဏ လာမေးကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်…၊ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာရဲ့ ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသတွေမှာ တကယ်တော့ နေ့ ၅ လ နဲ့ ည ၅ လစီရှိကြပါတယ်။ ကြားထဲက ၁ လစီကတော့ ရာသီကူး ပြောင်းတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ..??? ကမ္ဘာကြီးဟာ ပျမ်းမျှ ၂၃.၅ ဒီဂရီ တိမ်းစောင်းပြီး နေကို လှည့်ပတ် နေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသ (၂) ခုရှိပါတယ်။
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဟာ အာတိတ် စက်ဝန်းဒေသဖြစ်ပြီး..၊ တောင်ဝင်ရိုးစွန်း ကတော့ အန္တာတိက (အန္တာတိတ်စက်ဝန်း) ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်ဟာ ကမ္ဘာရဲ့ အီကွေတာရပ်ဝန်းဒေသ (တနည်း) အလယ်ပိုင်းကို အဓိက ကျရောက်ပြီး.. နေရောင်ခြည်ကျရောက်တဲ့ ဘက် ဟာ နေ့ဘက်ဖြစ်ပြီး..၊ နေရောင်ခြည် မရှိတဲ့ ဘက်ဟာ ည ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဇွန်လ ၂၀-၂၂ ရောက်တိုင်း ဥတ္တရ (မြောက်) ယဉ် စွန်းချိန် ကျရောက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၁-၂၂ မှာတော့ ဒက္ခိဏ (တောင်) ယဉ်စွန်းချိန် ကျရောက်ပါတယ်။
အခုလို ဇွန်၊ ဇူလိုင်လ များမှာ အီကွေတာမှ အထက် (မြောက်) သို့ တက်လေလေ.. နေနှင့် ထိတွေ့ချိန် (တနည်း) နေ့အချိန်များလေလေ ဖြစ်ပြီး၊ အီကွေတာမှ တောင်ဘက်သို့ ဆင်းလေလေ ညအချိန် ပိုများလေ ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရိုးစွန်းဒေသကတော့.. နေနဲ့ အစဉ်အမြဲ ထိတွေ့ နေတဲ့အတွက် ၂၄ နာရီလုံးလုံး နေ့ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာတိတ်စက်ဝန်း (တနည်း) မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ နော်ဝေး နိုင်ငံနဲ့ ဖင်လန် နိုင်ငံရဲ့ ဒေသအချို့၊ ရုရှား၊ ကနေဒါ နဲ့ ဂရင်းလန်မြောက်ပိုင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အံဩဖှယျရာ နမေဝငျတဲ့ မွို့ နှငျ့ (၂၄) နာရီ ပတျလုံး နမေမွငျရတဲ့ မွို့
နျောဝေးနိုငျငံ Svalbard မွို့ငယျလေးမှာဆိုလြှငျ နှရောသီ ရကျ (၆၀) လုံးလုံး နမေဝငျပဲ၊ မွောကျဝငျရိုးစှနျး ဒသေတဈခုလုံးဟာ နှဈစဉျ ဧပွီလ မှ သွဂုတျလအထိ နကေို ၂၄ နာရီပတျလုံး မွငျတှနေ့ရေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လဲ.. အောကျတိုဘာလ မှ ဖဖေျောဝါရီလအထိ ကပြွနျ တော့ ၂၄ နာရီပတျလုံး နကေို မမွငျရပွနျပါဘူး။ မတျလ နဲ့ စကျတငျဘာလတှမှောတော့ နရေောငျခွညျဟာ အီကှတောပျေါကို တညျ့မတျ စှာ ကရြောကျခွငျးကွောငျ့ နေ့ နဲ့ ည အခြိနျ တူညီ ကွပါတယျ။
နေ့ ၆ လ၊ ည ၆ လ လို့ ပွောကွတာ ကွားဖူး ကွမှာပါ။ တခြို့ကလဲ အဲ့ဒီ့ဆိုလိုရငျးကို မကွာခဏ လာမေးကွပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ…၊ ကနြျောတို့ ကမ်ဘာရဲ့ ဝငျရိုးစှနျး ဒသေတှမှော တကယျတော့ နေ့ ၅ လ နဲ့ ည ၅ လစီရှိကွပါတယျ။ ကွားထဲက ၁ လစီကတော့ ရာသီကူး ပွောငျးတဲ့ အခြိနျ ဖွဈပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့ပါလဲ..??? ကမ်ဘာကွီးဟာ ပမျြးမြှ ၂၃.၅ ဒီဂရီ တိမျးစောငျးပွီး နကေို လှညျ့ပတျ နပေါတယျ။ ကမ်ဘာမှာ ဝငျရိုးစှနျးဒသေ (၂) ခုရှိပါတယျ။
မွောကျဝငျရိုးစှနျးဟာ အာတိတျ စကျဝနျးဒသေဖွဈပွီး..၊ တောငျဝငျရိုးစှနျး ကတော့ အန်တာတိက (အန်တာတိတျစကျဝနျး) ဒသေဖွဈပါတယျ။ နရေောငျခွညျဟာ ကမ်ဘာရဲ့ အီကှတောရပျဝနျးဒသေ (တနညျး) အလယျပိုငျးကို အဓိက ကရြောကျပွီး.. နရေောငျခွညျကရြောကျတဲ့ ဘကျ ဟာ နဘေ့ကျဖွဈပွီး..၊ နရေောငျခွညျ မရှိတဲ့ ဘကျဟာ ည ဘကျဖွဈပါတယျ။ နှဈစဉျ ဇှနျလ ၂၀-၂၂ ရောကျတိုငျး ဥတ်တရ (မွောကျ) ယဉျ စှနျးခြိနျ ကရြောကျပွီး ဒီဇငျဘာ ၂၁-၂၂ မှာတော့ ဒက်ခိဏ (တောငျ) ယဉျစှနျးခြိနျ ကရြောကျပါတယျ။
အခုလို ဇှနျ၊ ဇူလိုငျလ မြားမှာ အီကှတောမှ အထကျ (မွောကျ) သို့ တကျလလေေ.. နနှေငျ့ ထိတှခြေိ့နျ (တနညျး) နအေ့ခြိနျမြားလလေေ ဖွဈပွီး၊ အီကှတောမှ တောငျဘကျသို့ ဆငျးလလေေ ညအခြိနျ ပိုမြားလေ ဖွဈပါတယျ။ဝငျရိုးစှနျးဒသေကတော့.. နနေဲ့ အစဉျအမွဲ ထိတှေ့ နတေဲ့အတှကျ ၂၄ နာရီလုံးလုံး နဖွေ့ဈနရေခွငျးဖွဈပါတယျ။အာတိတျစကျဝနျး (တနညျး) မွောကျဝငျရိုးစှနျးမှာ ရှိနတေဲ့ နိုငျငံတှကေတော့ နျောဝေး နိုငျငံနဲ့ ဖငျလနျ နိုငျငံရဲ့ ဒသေအခြို့၊ ရုရှား၊ ကနဒေါ နဲ့ ဂရငျးလနျမွောကျပိုငျးတို့ ပါဝငျပါတယျ။